‘Ady’ Malalaka Nifanaovan’ny Kazakhs Roalahy Tanaty Fefy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2016 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, नेपाली, English
Pikantsarin'ny ady “Mixed Martial Arts – Haiady Mifangaro” tao Shanghai teo amin'i Aibek Nurseit sy Gabit Turganbek avy amin'ny foko Kazakh, avy amin'ny lahatsary nakarin'ny QAIMAQ TV.
Niresaka momba ny ‘ady’ hafahafa anaty fefy nampiasana ny “Mixed Martial Arts” (MMA) teo amin'ny iray amin'ireo olom-pireneny ihany sy ny havany ara-poko avy any Shina tao Shanghai ny tambajotran'ny mediam-bahoaka Kazakh, izay niafara tamin'ny fampitsaharana noho ny fandikana fepetra, taorian'ny nanaovan'ireo mpiady roalahy fihetsiketsehana fotsiny.
Ny anton'izany, araka ny ren'ny RFE/RL sy ny vohikala Kazakh maro be momba ny vaovao ao an-toerana, dia tsy te hifandratra ireo Kazakhs roa ireo.
Ny fampisehoana ny firahalahiana, izay nahitàna tolona mazava saingy tsy nisy fifangaraoan'ny lohalika mandrava, daka sy fampiasàna totohondry izay mampalàza ilay fanatanjahantena, dia tsy nanaitra ny mpitsara, izay nampitsahatra avy hatrany ny roa tonta.
Eto ambany ny lahatsary momba ny ady:
Nilaza tamin'ny RFE/RL ny iray tamin'ireo mpiady, Aibek Nurseit:
Samy tonga tamin'ny famarànana izaho sy Gabit [Turganbek]. Resiko ny mpiady Frantsay iray ary i Gabit naharesy lehilahy Okrainiana iray. Tsy nifanaiky mialoha mihitsy izahay fa tsy hifamely. [Nefa] rehefa niditra teo amin'ny ringa aho ary nanomboka ny ady, tsapako avy hatrany fa toa nisoroka ny hamely ahy i Gabit. Fantatro fa tsy te-hiady amiko izy, ary tsy afaka hikasi-tànana Kazakh iray hafa koa aho.
Mitohy ny tatitry ny RFE/R'L:
Nilaza i Nurseit fa vola be sy anaram-boninahitra ho tompondaka no loka tamin'izany, fa tsy te-hahazo izany izy amin'ny fidarohana Kazakh mpiray tanindrazana aminy izy.
“Nihaona tamin'i Gabit tao amin'ny lanonana fiaraha-misakafo aho taorian'ny ady. Nifandray tànana izahay, ary izay izany,” hoy izy.
Raha dinihana ireo fanehoankevitra tao amin'ny YouTube, nankasitrahan'ny olon-tsotra Kazakhs tsara ilay fihetsika:
Misaotra betsaka anareo ry tovolahy, asa tsara. Nampirehareha anay ianareo!
Iray amin'ireo foko Kazakhs 1,5 tapitrisa avy any amin'ny faritanin'i Xinjiang amin'ny faritra andrefan'i Shina i Gabit Turganbek. Ny Kazakhs no mponina maro indrindra ao Azia Afovoany amin'ireo vitsy an'isa monina ao amin'ilay faritany, ankoatra ny Uighurs (tombanana ho 8,5 tapitrisa), raha toa ka monina ao amin'ilay faritra ihany koa ny Kyrgyz, ny Uzbeks ary ny Tajiks.
Mihoatra ny 65%-n'ny mponina ao Kazakhstan, tao amin'ny firaisana Sovietika teo aloha, no foko Kazakhs, ka ny iray ampahadimin'ny mponina ao amin'ny fanjakana no foko Rosiana no mandrafitra azy.